ओमिक्रोनले भयावह स्थिति ल्याउने सम्भावना कति? (भिडियो वार्ता) :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कमला गुरुङ शुक्रबार, पुस ३०, २०७८, २०:३३:००
काठमाडौं - नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो छ। शुक्रबार मात्र देशभर ५ हजार ८७ जना संक्रमित भेटिए।बिहीबार देशभर ३ हजार ५५३ संक्रमित भेटिएका थिए भने यसअघि बुधबार ३ हजार ७५ जना संक्रमित भेटिएका थिए। काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुमा पनि संक्रमितको संख्या विस्तारै बढ्न थालेको छ। यद्यपि गम्भीर अवस्थाका भर्ना हुने बिरामीको संख्या भने कम देखिएको छ।
बढ्दो कोरोना संक्रमितको ग्राफलाई यसका विज्ञले कसरी नियाली रहेका छन्? ओमिक्रोन भेरियन्टले भयावह स्थिति ल्याउने सम्भावना कत्तिको छ लगायत विषयमा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गरेका छौँ। डा पुनसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
कोरोना संक्रमितको दैनिक बढ्दो संख्यालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ?
– ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदायमा फैलिरहेको सरकारको तथ्यांकले पनि देखाउँछ।
– ओमिक्रोन छिटो फैलिने भएकाले धेरै मानिस संक्रमित भइरहेका छन्।
– दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, बेलायतको अवस्थालाई हेर्दा ओमिक्रोन एकदम छिटो गतिमा उत्कर्षमा पुगेको र त्यति नै छिटो तल झरेको पनि देखिन्छ।
– दक्षिण अफ्रिकामा यो लहर लगभग कम भएको जस्तो देखिन्छ।
– चार/पाँच हप्ताको अवधिमा यो उत्कर्षमा पुग्ने र त्यसपछि कम हुँदै जाने जस्तो देखिन्छ।
नेपालमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको डेढ महिना जति भयो। अहिले नै संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको कारण के हो?
– नेपालमा संक्रमित सबैको कोरोना परीक्षण भएको छैन।
– पीसीआरमा एस जिन पनि पत्ता लगाउन सकेको भए त्यसबाट एस जिन पोजिटिभ र नेगेटिभ थाहा पाउन सकिन्थ्यो।
– ओमिक्रोनसँगै डेल्टा पनि घुमिरहेको हुन सक्छ।
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपनि मृत्युको संख्या भने किन स्थिर छ ?
– ओमिक्रोनको विशेषता भनेकै यो छिटो फैलिन सक्छ।
– ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएका देशको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि संक्रमितको संख्या बढीरहँदा मृत्युको संख्या भने स्थिर देखिन्छ।
– नेपालमा थप आत्तिने भन्दा पनि यसको संक्रमणलाई रोक्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ।
– उच्च जोखिममा रहेका वर्गहरुलाई खोपको दायरामा ल्याउन सके यसबाट हुने थप क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
– हाल देखिएका संक्रमितहरुमा रुघाखोकी र ज्वरो आउने लक्षण देखिएका छन्।
– भारतमा आउने संक्रमितको उतारचढावलाई नियाल्नु अति नै महत्वपूर्ण छ।
– शुक्रराज अस्पतालमा आउने बिरामीहरु पनि सामान्य अवस्थाका मात्र छन्।
– दोस्रो लहरमा जस्तो भयावह स्थिति नआउँला की भन्ने मेरो अनुमान हो।
– भाइरसमा हुने म्युटेसन सधैं खराब नै हुन्छ भन्ने हुँदैन।
– यदी समुदायस्तरमा परीक्षण गर्‍यो भने यो भन्दा कयौँ गुणा संक्रमित होला भन्ने मेरो अनुमान छ।
यही क्रमले संक्रमितको संख्या बढ्दै गए भयावह स्थिति आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
– स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका, खोप नलगाएका व्यक्तिहरु अझै पनि समुदायमा छन्।
– यिनै जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरु प्रभावित हुन सक्छन्।
– तर अस्पतालहरुमा भर्ना हुने बिरामीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको भने छैन।
– डेल्टा भेरियन्टले जस्तो ल्याएको भयावह स्थिति ओमिक्रोनले नल्याउँला भन्ने मेरो अनुमान छ।
अधिकांश संक्रमितहरु हाल घरमै बसिरहेका छन्। उनीहरुले कस्तो किसिमको सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ?
– रुघाखोकी र ज्वरो आएको छ भने छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ।
– झोलिलो र स्वस्थ खानेकुरा खाने।
– अक्सिजनको मात्रा याद राख्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यका घरमै बसेपनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।
नेपालमा तेस्रो लहर सुरु भइसकेको हो?
– सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा तेस्रो लहरको संकेत गरेको छ।
– तर बिरामीको संख्या र लहरलाई अझै पनि नियाल्नु आवश्यक छ।
– म यसलाई ‘संक्रमितको तेस्रो लहर’ भन्न रुचाउँछु।
– अस्पतालमा भर्ना हुने गम्भीर खालका बिरामीहरुको संख्यालाई नियाल्नु आवश्यक छ।
– स्वास्थ्य संरचनाले धान्न सक्ने गरी संक्रमणलाई रोक्न सक्यौँ भने भयावह स्थिति नआउन सक्छ।